PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-23 - Iphini lemeya likhala ngobhuti abafuna inyama enyameni
Iphini lemeya likhala ngobhuti abafuna inyama enyameni
Isolezwe ngeSonto - 2018-12-23 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE NGESONTO
KUNGANI bephume nawe iqhubu bebaningi kangaka abasebenzi bakaMasipala weTheku?
KUYACACA ukuthi kunezitha ezingayifuni inqubekela phambili. Kukhona abantu abangajabule ngendlela engiphethe ngayo iTheku ngoba selokhu ngathatha izintambo zokuba iMeya, ngisebenza ngokuzikhandla ukuqeda inkohlakalo nobugebengu. Bazama ngazo zonke izindlela ukunginqinda amandla baphinde bangiphazamise ukuze ngingaphuthumisi emphakathini izinhlelo zokulwa nobubha.
KUTHENI kuwe ubona lo mbiko wokuthi ungase uboshwe maduze? likaMgcinimafa (Auditor General), ihhovisi loMvikeli woMphakathi namanye amahhovisi. Uma sesilwenzile uphenyo lwethu siyaye sicele lezi zinhlaka zonke ukuthi zingenelele ukuze kuboshwe labo abasuke betholakale benze inkohlakalo. KUKHALWA ngobhuti ababuya emadolobheni bafune ukuya ocansini nezintombi zabo abazishiya emakhaya ngaphandle kwekhondomu.
Kuthiwa lokhu kubuyisela emuva imizamo kahulumeni yokulwa nokubhebhetheka kwesifo sengculazi.
Lokhu kuvezwe yiPhini leMeya yaseBig 5 Hlabisa uNkk Hlengiwe Nkosi-Mngomezulu ngesikhathi ekhuluma nomphakathi waseZibayeni, kwa-ward 9 KwaHlabisa.
Bekukhanyiswa amakhandlela kukhunjulwa ababulawa yisifo sengculazi, aphila naso nabathintekile ngenxa yaso nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane.
Eminyakeni eyedlule indawo yakwaHlabisa ike yaduma ngokuba nesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe yileli gciwane.
UNkk Nkosi-Mngomezulu uthe kuyabakhathaza ukuthi kufike obhuti abavela eThekwini naseGoli bathi bafuna inyama enyameni. Uthe kubuyisela imizamo yabo emuva yokulwa nokubhebhetheka kwengculazi.
“Abesifazane abathandana nalabo bhuti bayasho ukuthi bafika bafune inyama enyameni. Kumele bafunde ukuthi siphelile isikhathi senyama enyameni,” kusho uNkk Nkosi-Mngomezulu.
Uqhube wathi sehlle isibalo sabaguliswa yilesi sifo uma kuqhathaniswa nakuqala. Ugqugquzele abantu ukuthi abaye kozihlola ukuze uma sebetholile ukuthi banaso, badle imishanguzo yokusithithibalisa.
“Izibalo zehle kakhulu. Lolu lwazi siluthola ezibhedlela okuyizona ezelapha abantu abanaleli gciwane.
“Zithi sehle kakhulu isibalo njengoba nomama abanaleli gciwane bengasaledluliseli ezinganeni abazizalayo.
“Okunye okusisizayo ukuthi sekunama-Ward Aids Counsels angena umuzi nomuzi kusizwa abantu abanaleli gciwane.
“Akasekho umuntu obulawa yingculazi manje ngoba abantu sebedla imishanguzo yokulithithibalisa.
“Okubuhlungu ukuthi asikakafiki ezingeni lokuthi sithi akekho othelelekayo.
Thina njengohulumeni kumele sihambe phambili ekulweni nalesi sifo.
“Sigqugquzela abantu ukuthi bazithibe njengoba kuyisikhathi samaholidi kaDisemba noma basebenzise amakhondomu. Sicela nobhuti baseThekwini nakoGoli ukuthi basilekelele nabo,” kusho uNkk NkosiMngomezulu.
Uthe kumele kugqugquzelwe isiko lokuhlolwa kwezintombi ukuze zizithibe kuze kufike isikhathi somshado.
“Isifo ngeke sikuthole uma uzithibile kodwa sikuthola uma ulala ngaphandle kwekhondomu. Siyakhala futhi ngabantu abahlukumeza abesifazane nezingane.
“Lo mkhankaso wezinsuku ezingu-16 wokulwa nokuhlukunyewa kwabesifazane nezingane kumele ushunyayelwe kakhulu kwabesilisa.
“Kule ndawo yakithi kuke kwaba nengane yentombazane eshaya umuntu omdala. Leyo nto asiyifuni neze,” kubeka yena.
IMEYA yoMkhandlu weTheku uNkk Zandile Gumede usola itulo lokumketula ngokusabalala kwemibiko ethi uzoboshwa oKlebe maduze Isithombe: SITHUNYELWE
IPHINI leMeya yaseBig 5 Hlabisa uNkk Hlengiwe Nkosi-Mngomezulu ugqugquzela abantu ukuthi bayozihlolela igciwane lengculazi Isithombe: SITHUNYELWE